Aung Win Hein (Noble): 11/25/09
ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ခေါင်းစားရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ရွာသူရွာသားအများစုကလည်း တောင်ယာအလုပ်တွေကို လုပ်ကြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ ရွာမှာတော့ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အခမ်းနားဆုံးပါပဲ။
ရွာပြင်ထွက်ပြီး လေ့လာကြည့်တော့ သင်းချိုင်းကုန်းက သေးသေးလေးဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီအထဲမှာမှ အုတ်ဂူလေးတစ်ခုကို သာတွေ့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့
ရွာထဲပြန်ဝင်လာတော့ ရွာထဲမှာ ဆေးခန်းမရှိဘူး။
ရွာမှာရှိတဲ့ လူဦးရေနဲ့ ဆိုရင် ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့
ညနေစောင်း၊ တည်းခိုတဲ့အိမ်ရောက်တော့ ရေချိုး၊ထမင်းစားပြီးတော့
အဲဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဘကြီးတင်ကို
ဒီရွာမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ချင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ဆေးခန်းဖွင့်ချင်တာတော့ မောင်ရင်လေး သဘောပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ဆရာဝန်လေးတစ်ယောက်လည်း ဆေးခန်းလာဖွင့်ဘူးပါတယ်။
စကားမဆုံးခင် ကျနော်က ဖြတ်ပြီးမေးလိုက်တာက
အခုတော့ သေဆုံးသွားရှာပြီကွယ့်။ ”
” ဘာဖြစ်လို့သေတာလဲ? အဘ”
ကျနော် ထိုရွာကအပြီးအပိုင် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အားနာတာကို စိတ်ကောင်း၊စေတနာကောင်းရှိတာလို့ထင်တတ်ပြန်တယ်။ မခက်ဘူးလား?
အလွန်ခက်ပါတယ်။ အဲဒီခက်တဲ့အထဲ ကျနော်လည်းပါနေပြန်တယ်။
သူငယ်ချင်းများငွေချေးတာကို အားနာတဲ့အတွက် မရှိတဲ့အထဲချေးပေါင်းလည်းများပြီ။ ပြန်မရပေါင်းလည်းများလှပြီ။
ဆိုတာကို သိထားသော်လည်း သူငယ်ချင်းများငွေချေးတိုင်း ချေးဖြစ်နေဆဲပင်။
ကျောင်းများတွင် အားမနာတတ်သော သင်ခန်းစာများထည့်သင်လျှင်ကောင်းမည်ဟု မကြာခဏတွေးမိပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးနဲ့ စကားပြောရင်း အားနာတတ်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီးစကားစပ်မိသွားပါတယ်။
မကြာခင်မှာပင် သူ့နည်းက အသုံးတည့်သွားပါတယ်။
“ ငါ့ကို ငွေတစ်သောင်းလောက်ချေးစမ်းပါ”
“ဘာလဲ မင်းစင်္ကာပူကို သွားမလို့လား?”
အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း သက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်။
တစ်ခါတုန်းက တနင်္ဂနွေရက် တစ်ရက်တွင်ကျနော်က အားလပ်နေတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ဟောပြောပွဲတစ်ခု သွားနားထောင်ဖို့အဖေါ်ညှိပါတယ်။
ဟောပြောသူအများထဲက တစ်ဦးကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေပါတယ်။
နားထောင်နေသော ပရိသတ်ကတော်တော် များပါတယ်။
ပရိသတ်အရေအတွက် အတိအကျတော့ မသိပါဘူး။
ပရိသတ်အများအပြားရှေ့တွင် ဟောပြောသူ ဦးတင်မောင်အေး က
သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ရိုးသားခြင်း ဟုထင်မိပါတယ်။
ဟောပြောနေရင်း သူ့ရဲ့လက်က ငွေ တစ်ထောင်ကျပ်တန်ကိုထုတ်ပြီး ကိုင်ထားပါတယ်။
“ ဒီငွေ တစ်ထောင်ကျပ်ကို ဘယ်သူလိုချင်သလဲ?
လိုချင်တဲ့သူ လက်မြှောက်ပြပါ ”လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကျနော် ဒီငွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကိုပေးပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကို ပထမ ဒါတော့လုပ်ခွင့်ပေးပါ။”
လို့ပြောရင်း ငွေစက္ကူကို လက်နဲ့ခြေမွပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့
မကြာခင်မှာပင် ထောင်ခဲ့တဲ့ လက်တွေလေထဲပြန်ထောင်လာပါတယ်။
“ကောင်းပြီ၊ ကျနော် ဒီလိုလုပ်ရင်ကော! လို့ပြောပြောဆိုဆို
အဲဒီနောက် “ကဲ……အခုရော…ဘယ်သူလိုချင်သေးလဲ?လို့ ထပ်မေးပြန်ပါတယ်။
“ကျနော် ဘာဘဲလုပ်လုပ် ခင်ဗျားတို့ကလိုချင်နေတာပဲ။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီငွေ တစ်ထောင်ကျပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကလျော့မသွားလို့ပေါ့။
ညစ်ပတ်စုတ်ကြေသွားလည်းပဲ ငွေတစ်ထောင်ဟာ တစ်ထောင်တန်ဖိုး ရှိနေဆဲပဲမဟုတ်လား?
အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့ မိမိဘာသာမြင်လာတတ်ပါတယ်။
အခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာလည်း အလားတူအမြင်မျိုး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒီတန်ဖိုးကို ဘယ်သူကမှ လျော့ချလို့မရပါဘူး။
“ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအစစ်အမှန်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဖို့ သတိပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့”..............။